Thomas Tuchel oo sharaxaad ka bixiyay sababta uu ugu diiday Mbappé inuu la tartamo Messi – Gool FM
Dajiye April 8, 2019
(Yurub) 08 Abriil 2019. Thomas Tuchel ayaa ka hadlay sababta uu kuriga keydka u dhigay Kylian Mbappé kulankii horyaalka France ay kula ciyaareen kooxda Strasbourg, kaasoo ku soo idlaaday barbaro 2-2 ah.
Waxaa muran iyo caro xoogan ka dhashay go’aankan uu kursiga keydka ku dhigay macalinka reer Germany ee Thomas Tuchel xidiga Kylian Mbappé, maadaama aysan kooxda qeyb ka ahayn tartanka Champions League.
Kylian Mbappé ayaa ilaa iyo haatan ka dhaliyay horyaalka Faransiiska 27 gool, wuxuuna booska 2-aad kaga jiraa loolanka loogu jiro kabta dahabka.
Lionel Messi ayaa hogaaminaya xidiga ugu guulasha badan 5 horyaal ee ugu waaweyn Yurub, kadib markii uu horyaalka La Liga kasoo dhaliyay 32 gool.
Hadaba Thomas Tuchel ayaa wuxuu sharaxaad ka bixiyay sababta uusan Mbappé ugu soo bilaabin kulankii Strasbourg, wuxuuna sheegay inuu ahaa go’aan uu ku diidanaa inuu la kulmo dhaawac, maadaama uu dareynsanaa daal dhanka jirka ah.
“Waxaan ku soo tiirsanaa Mbappé kulamo badan, qof walba ayaa la yaabay kasoo muuqashadiisa kursiga keydka, laakiin ma jirto cid dib u xasuusatay inuu si joogta ah u soo ciyaaray 9-kii kulan ee lasoo dhaafay, wuxuuna ka caawiyay kooxda inuu goolal badan u dhaliyo, waa wax cajiib ah”.
“Waa inaan ilaaliyaa ciyaartoyda, Mbappé wuxuu qabay dhibaatooyin muruqa ah seddexdii kulan ee ugu danbeysay, sidaasi darteed way adagtahay inay ku tiirsanaato, si aan kaga fogaano wixii ku dhacay Marquinhos”.
“Inaan u soo baxno Champions Leagu xilli ciyaareedka soo socda, waa wax anaga nagu xiran” - Unai Emery